Maxaa ka soo baxay baaritaankii Korona Fayras ee lagu sameeyey Mohamed Salah… (Miyaa markale xanuunka laga helay Weeraryahanka Kooxda Liverpool?) – Gool FM
(Liverpool) 23 Nof 2020. Weeraryahanka Kooxda Liverpool ee Mohamed Salah ayaa lagu sameeyey baaritaan kale oo la xiriira caabuqa Korona Fayras.
Jamaahiirta Kooxda Liverpool ayaana war fiican ka helaya xaaladda Weeraryahankooda Mohamed Salah oo laga waayey Korona Fayras.
Macallinka Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa u muuqday mid xaqiijiyey in xiddigiisa Mohamed Salah haatan laga waayey Korona Fayras, isla markaana uu kooxda inteeda kale tababarka kula soo biirayo maanta oo Isniin ah.
Xiddiga xulka qaranka Masar ayaa markii ugu horreysay laga helay Korona Fayras 13-ka bishan November, isagoo gudanayey waajibaadka xulkiisa qaranka Egypt, kaddib markii uu ka qeyb galay aqal-galka Walaalkiis.
Klopp ayaa tilmaamay in Salah uu diyaar u noqon doono tababarka maanta oo Isniin ah ka hor kulanka Champions League ay Arbacada Anfield kula ciyaari doonaan Naadiga Atalanta.
Macallinka reer Jarmal ayaa isagoo arrintan ka hadlayey waxa uu yiri: “Waxaan maqlay in Salah uu ahaa mid laga waayey xanuunka, berri (Isniinta) waxaan galaynaa baaritaanka UEFA, wuu ku jiri doonaa taas, hadda wuu nala tababaran karaa.
“Waxaa jira labo tijaabo oo loo qorsheeyay labada maalmood ee soo socota marka waa la tijaabin doonaa sida dhammaanteenba aan baaritaanka u mareyno oo kale.”
Inkastoo uu maqnaa Salah kulankii Leicester ee xalay, haddana Liverpool waxay ku raaxaysatay guul 3-0 ah oo ka soo gaartay Kooxda Tababare Brendan Rodgers ee Leicester City, waxaana Reds ay dib ugu soo laabatay hoggaanka horyaalka Premier League.